जीवनशैली Archives -
८ घण्टा अगाडिetoday
अंग्रेजिमा एउटा भनाई छ “वुमन इज अ फराइन ल्याण्ड”, अर्थात महिला बुझ्नै नसकिने प्राणी हो । महिलाले साच्चिकै जिवनमा के चाहन्छ ? त्यो पनी २० वर्षको योङ्ग उमेरमा । यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न हो । महिलाले यो टिनएजमा केही निश्चित चिजहरु चाहन्छन् । जस्लाई तपाइँ हामिले उनिहरुको सामान्य व्यावहारबाट पनी थाहा पाउन सक्छौँ । के हुन ति चाहानाहरु? स्वतन्त्रता २० वर्षको कलिलो उमेरमा महिलाले धेरै चाहाने भनेको स्वतन्त्र रहनु नै हो । तिनिहरु एक्लै बस्न र जे आफ्नो मनमा लाग्यो त्यही गर्न चाहान्छन् । केही समयसम्म आफ्नो गार्जिएनको अन्डरमा रहेपनी…
तपाइलाई कोहि पाटनर (साथी) चाहिएको छ ? यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस
हाम्रो समाजमा एउटा पुरानो भनाई पनि छ ४० लागेछ बैस जागेछ । सायद यो भनाई भित्र केही बास्ततिक्ता पनि छ । दुई छोराकी आमा भर्खर जुँ’गाको रेखी ‘बसे’को तन्नेरीसँग ‘चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् ‘वि’देशमा हुने श्रीमानको माया नपाउने असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू आन्टीहरूसँग फस्नुका कारण अनेक प्रकारका रहेका छन्। फोन नम्बर र फेसबुक आईडी चाहिए तलको लिंकमा जानुहोस कसैका लागि यो एकप्रकारको…
२ महिना अगाडि २ महिना अगाडिetoday
एक जना महिलाले कति जना पुरुषसँग विवाह गर्लिन, एकजनासँग वा दुईजनासँग तर एक महिलाले भने विवाहमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेकी छन् । एकपछि अर्को गर्दै ती महिलाले ९ जना पुरुषसँग प्रेम विवाह गरिन् । घ´टना सार्वजनिक भएपछि महिलाका आठौं पतिले प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरे । प्रहरीले उक्त घटनामा सम्झौताका लागि धेरै प्रयास गर्यो तर कुरा मिलेन । महिलाले नवौं पतिसँग प्रेम गरेको बताइन् र उनीसँगै हिँडिन् । प्रहरीका अनुसार भारतको लखीमपुर शहरको सदर क्षेत्रमा बस्ने महिलाको १० वर्ष पहिले सोही ठाउँका एक युवकसँग विवाह गरेकी थिइन् । केही दिनपछि पती–पत्नीबीच…